Shaqo Joojinta Macalimiinta Kenya oo Gashay Asbuucii Labaad – Radio Daljir
Seteembar 7, 2015 5:28 b 0
Isniin, September 07, 2015 (Daljir) — Shaqa joojinta macalimiinta ee ka socota guud ahaan dalka ayaa maanta oo isniin ah gashay isbuucii labaad oo xiriir ah, iyadoo walina uu halkiisi taaganyahay muranka xoogan ee u dhaxeeya dowladda iyo ururada macalimiinta.
Iskuullada dowlada ee hoose/dhexe iyo kuwa sare ayaa wali u xiran gadoodka ay sameynayaan macalimiinta qaranka oo doonaya in loo sameeyo mushaar kordhinta ay maxkamada u amartay.
In ka badan 10 million oo arday ah oo Schoollada dowlada wax ka barata ayaan hubin sida uu noqon doono xaalka wax barashadooda, kaasoo ku xiran go’aannada macalimiinta iyo waaxyaha wax barashada ee dowladda.
Gudiga adeega macalimiinta u qaabilsan dowladda ee loo soo gaabiyo TSC ayaa maanta oo isniin ah la filayaa in ay qaadaan tallaabo ay ugu goodiyeen barayaasha oo ah in ay dhamaan kuwa shaqada ka maqan macalimiin kale ku badali doonto.
Hase ahaatee ururada macalimiinta eek ala ah KNUT iyo KUPPET ayaa dhankooda u muuqda kuwo ku dhiirran mowqifkooda oo ay u arkaan mid sharci ah oo ay xaqooda ku raadinayaan.
Isbuuci aan kasoo gudubnay ayey maxkamada shaqaaleynta iyo xiriirka shaqaalaha ku dhawaaqday in gadoodka shaqa joojinta macalimiinta uu yahay mid aan sharciga waafaqsaneyn, in kastoo aysan amar ku bixinin in lasoo af jaro,Waxaa haatan wali isasoo taraya baaqyada ku aadan in xal loo helo mushkiladda ka aloosan mushaaraadka macalimiinta.
Qaar kamid ah Soo Galootiga Muslimiinta ah ee Jarmalka oo Gaaloobay